Ungenisa njani kwaye ukhangele uququzelelo kwiimephu zikaGoogle | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | ngokubanzi, Tutorials
Iimephu zikaGoogle sisicelo esibalulekileyo kubomi bemihla ngemihla babantu abaninzi, abayisebenzisela umsebenzi wabo naxa behamba yonke imihla. Ikwayinkqubo efanelekileyo yeholide zethu okanye ukuba sifuna ukufumana indawo ethile. Xa kuziwa ekufuneni ngaphakathi kwesicelo, okanye kwi-web version yayo, sinokukhetha ezahlukeneyo.
Singakhangela ngokufaka igama lesixeko okanye indawo ethile (imyuziyam, ivenkile, irestyu okanye indawo enomdla). Kodwa ukuba siyafuna, sinokubakho khangela kwiGoogle Maps usebenzisa izilungelelaniso. Nangona oku kunokwenzeka kuyinto evelisa amathandabuzo kubasebenzisi abaninzi. Kungenzeka njani ukuba uyisebenzise?
Ukuba sifuna, sinokukhangela indawo ngokungena kubude bayo kunye nolungelelwaniso lobude. Nangona kule ngqiqo, kubalulekile ukuba sibazi kwangaphambili, ukuze sikwazi ukuzisebenzisa kolu phando kwisicelo. Inxalenye ebalulekileyo kule meko yifomathi esiyisebenzisayo. Ngale nto, iingcebiso ezahlukeneyo zinikwa nguGoogle.
Ungajonga njani kwaye ucime imbali yendawo yeemephu zikaGoogle
1 Ukulungelelanisa ifomathi
2 Ungangenisa njani ulungelelwaniso kwiiMaphu zikaGoogle
3 Ulufumana njani uququzelelo kwiimephu zikaGoogle zesiza
Xa sibeka ulungelelwaniso lwendawo ethile, sinokusebenzisa iifomathi ezininzi. Iimephu zikaGoogle nazo zamkela ezininziKodwa kunokwenzeka ukuba ngamanye amaxesha abasebenzisi benze impazamo, ukuze bangayifumani indawo abafuna ukuyikhangela kunye nesicelo. Ngethamsanqa, usetyenziso lusibonisa ngokucacileyo iifomathi esinokuzisebenzisa, zezi zilandelayo:
Iidigri, imizuzu kunye nemizuzwana (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
AmaDigri kunye neMizuzu eDesimali (i-DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
Iidigri ezili-XNUMX (DD): 41.40338, 2.17403
Ke ngoko, ukuba usebenzisa naziphi na ezi fomati zokulungelelanisa kwiiMephu zikaGoogle, ungayifumana indawo obuyikhangela. Ukuthintela iingxaki xa usebenzisa ezi zilungelelaniso, kukho iingcebiso ezithile ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwisicelo:
Sebenzisa isimboli yesidanga endaweni kanobumba "g"
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe amaxesha eedesimali endaweni yekoma. Eyona ndlela ilungileyo ke yile: 41.40338, 2.17403.
Bhala uququzelelo lobude kuqala kwaye emva koko ulungelelwaniso lobude
Jonga ukuba inani lokuqala lolungelelwaniso lobubanzi lixabiso eliphakathi kwe-90 kunye ne-90
Jonga ukuba inani lokuqala lolungelelwaniso lobude linani eliphakathi kwe-180 kunye ne-180
Apha ngezantsi siza kukubonisa ukuba bangena njani kwi-app, ukufumana iziphumo ezinqwenelekayo kule meko.
Ungangenisa njani ulungelelwaniso kwiiMaphu zikaGoogle
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuvula iGoogle Maps. Singazisebenzisa zombini iinguqulelo zedesktop kunye nokusetyenziswa kwayo kweefowuni eziphathwayo kunye neetafile. Inkqubo esiza kuyisebenzisa iyafana maxa onke, ke ayinamsebenzi ukuba uyisebenzisa njani. Xa sivule usetyenziso okanye iwebhu, kufuneka siye kwibar yokukhangela.
Kwibar yokukhangela kwisicelo ekufuneka senzile ngenisa izilungelelaniso esifuna ukuzifumana, ukusebenzisa nayiphi na ifomathi esele siyikhankanyile kwicandelo elidlulileyo. Nje ukuba ezi zilungelelaniso zingenisiwe, kufuneka sibethe u-Enter okanye ucofe uphawu lweglasi, ukuze ukhangelo olukhankanyiweyo ngaphambili lwenziwe kwisicelo. Indawo apho ezi zilungelelaniso eziza kuthi emva koko ziboniswe kwiscreen.
Kungenzeka ukuba kukho amaxesha apho iimephu zikaGoogle Sibonise inqaku kwimephu apho ezi zilungelelaniso zikhona, kodwa ababonisi igama elichanekileyo lale ndawo. Nangona idilesi okanye igama lihlala libonakalisiwe kwinkcazo, esivumela ukuba sazi ukuba ingaba yile nto besiyifuna kwesi sihlandlo. Ke sele siyazi indawo ukuba ezi zinto zilungelelanisiweyo besizikhangela kwi-app. Kodwa ukuba unamathandabuzo, ungahlala ujonga emephini, ukubona ukuba ikuthumele apho ubufuna ukuya khona ngenene.
Iimephu zikaGoogle azisakuvumeli ukuba ubhukishe i-Uber kwisicelo
Ulufumana njani uququzelelo kwiimephu zikaGoogle zesiza
Imeko echaseneyo inokwenzeka nakwenye yangaphambili. Oko kukuthi, siyayazi indawo esiyikhangelayo (igama okanye idilesi), kodwa asizazi izilungelelaniso zale ndawo. Kodwa singathanda ukufikelela kolu lwazi, nokuba kungokuthanda ukwazi okanye kuba sine-GPS esifuna ukungena kuyo, imeko leyo ikwiimodeli ezithile. Iimaphu zikaGoogle zikwasivumela ukuba silufumane olu lwazi ngokulula.
Kule meko, kufuneka sivule usetyenziso kwifowuni okanye kwithebhulethi, nangona kunokwenzeka kwikhompyuter. Ngoko ke kufuneka cofa ixesha elide kwindawo ethile emephini, apho kungekho ilebhile. Senza oku de kubonakale isikhonkwane esibomvu kwiscreen sefowuni, kwimephu leyo. Emva koko siyabona ukuba kwinxalenye ephezulu yale bhokisi, apho ulwazi malunga nesiza esikhe sakucofa kuso siboniswa, ii-coordinates zayo ziboniswa.
Kwimeko apho usebenzisa uguqulelo lwewebhu lweMaphu zikaGoogle, kuya kufuneka Cofa nge mouse kwindawo emephini apho ufuna ukwazi ezi zilungelelaniso. Ke kule meko i-pushpin engwevu iyaboniswa. Kwindawo esezantsi kwesikrini, kuya kuvela ibhokisi, ebonisa ulwazi lweso siza, njengegama kunye nesixeko. Siyakwazi ukubona uququzelelo lwalo, oluya kuthi xa sifuna ukuba sikwazi ukukopa, silusebenzise kwelinye icala okanye ukuba kufuneka sibangenise kwi-GPS. Kulula kakhulu ukufumana olu lwazi ukuba usebenzisa olu khetho kwikhompyuter yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ubeka njani uququzelelo kwiimephu zikaGoogle